Global Voices teny Malagasy » Tajikistàna: Firenena Mahantra Manana Fitsaràna Lafo Indrindra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Marsa 2018 5:55 GMT 1	 · Mpanoratra Vadim Sadonshoev Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Tajikistan, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
Firenena mahantra indrindra ao Azia Afovoany, nanomboka ny fitsaràna faran'izay tena lafo indrindra tao anatin'ny tantaran'ireo raharaham-pitsaràna Britanika i Tajikistàna. Handoa vola 120 tapitrisa dolara mikasika ireo haba ara-dalàna i Tajikistàna, izay manome ny 5,2% amin'ny Harin-karena Faoben'ny firenena. Ny Orinasa Tajik Aluminum (Talco)  no tena taolana mampifanolana, izay an'ny fanjakana manontolo. Ampangain'ny andaniny Tajik ho manao hosoka ireo mpîara-miasa aminy.
Tany aloha tany dia nampifandraisin'ny  Registan tamin'ny lahatsoratr'i John Helmer mikasika an'io fitsaràna io
Mifandray  amin'ny lahatsoratra ao amin'ny Asia Times i Ian ao amin'ny Beyond the River
Raha ny marina, mampivanàka an'izao tontolo izao io fitsaràna io noho ny fahitàna ny tontalin'ireo saran'ny fitsaràna sy ny fampitahana ny Harinkarena Faobe ao Tajikistàna. Mihoatra avo folo heny amin'izay kasain'ny  ben'ny tanàna Dushanbe ho angonina avy amin'ireo mponina ao andrenivohitr'i Tajik mba hanamboarana ny tohodranon'i Rogun, izay mety hahavatsy herinaratra ampy ho an'i Tajikistàna.
Manontany tena  [tj] i Tojvar ny amin'izay toerana fiaviana hakàn'ireo mpiasam-panjakantsika an'io vola io:
Mety ho loharanom-bola hanatevenana ny toebola ny viraty ao Tajikistàna sy hanafahana ny firenena ao anatin'ny krizy henjana ara-toekarena. Tamin'ny taona lasa, nanao tatitra mikasika ireo tombontsoa azony ny Talco, ary tena goavana izany. Kanefa, mieritreritra  i Central Asia fa ho hakelezin'ny kolikoly ilay tombontsoa, izay tsy hitondra fahasamihafàna akory eo amin'ny firenena.
Nalefa ihany koa tamin'ny neweurasia .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/28/114898/
 Orinasa Tajik Aluminum (Talco): http://en.wikipedia.org/wiki/TadAZ
 Manontany tena: http://tojvar.wordpress.com/2008/05/01/%d0%98%d1%84%d1%88%d0%be%d0%b8-%d0%b0%d1%81%d1%80%d0%be%d1%80-%d0%b4%d0%b0%d1%80-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d2%b3%d0%b8-%d0%9b%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd/